'नर्कको ढोका' बन्द गरिँदै - Khabar Break
तुर्कमेनिस्तानमा ‘नर्कको प्रवेशद्वार’ भनेर चिनिने ठाउँलाई त्यहाँको सरकारले बन्द गर्न आदेश दिएको छ। विगत ५० वर्षदेखि तुर्कमेनिस्तानको कारकुम मरुभूमिमा एउटा खाल्डो रहेको छ। २२९ फिट चौडाइ र ६६ फिट गहिरो उक्त खाल्डोमा मिथेन ग्यासका कारण लगातार चलिरहेको देख्न सकिन्छ। जसलाई वैज्ञानिकहरुले ‘गेटवे टु हेल’ अर्थात् नर्कको प्रवेशद्वार भनेर नामाकरण गरेका थिए।
सन् १९७१ देखि लगातार बलिरहेको उक्त खाल्डोलाई तुर्कमेनिस्तानले यसअघि सन् २०१० मा पनि पुर्न आदेश दिएको थियो। तर पुर्न भने सकेको थिएन।
त्यतिबेला खाल्डोबाट एक्कासि ग्यास निस्किन थालेपछि रसियाका वैज्ञानिकहरुले खोज अनुसन्धान गरेका थिए। त्यही बेला खाल्डोबाट मिथेन ग्यास निस्किएको पत्ता चलेको थियो। मिथेन ग्यासलाई नस्ट गर्न वैज्ञानिकहरुलै नै आगो लगाइदिएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा खबर छ। त्यतिबेला देखि नै यो आगो निरन्तर बलिरहेको छ।
अचम्म लाग्ला तर स्याम्पुको बढी प्रयोगले पनि मोटो बनाउन सक्छ!
विश्वका यी ५ प्रख्यात सहर, जुन अहिले पानीमा डुबिसके
यस्तो हुनेछ सामसङ ग्यालेक्सी एस२२ सिरिजका स्मार्ट फोन, लञ्च हुनु अघि नै फिचर्स सार्वजनिक !
युट्युबमा अहिले सम्मको रेकर्ड तोडेको भिडियो जसलाई १० अर्व भन्दा बढीले हेरे
स्कन्ध पुराणमा लेखिएजस्तो श्रीकृष्ण भगवानको पदचिह्न भेटियो